एउटालाई म्वाइँ खाँने अर्कोलाई अठ्याउँने ! — News of The World
अहिले लुटेरा को भन्ने विवाद निकै बढेको छ पाठकबृन्द । अघिल्लो महिना नेपालभरी ‘लुट्नसम्म लुट’को चर्चा खुबै रह्यो । जताततै लुट देखाएका एकजना गायकले विम्व नसमाइकनै सिधा राष्ट्रपतिलाई प्रहार गरे । उनले लुट्न आग्रह गरे वा लुट मच्याउन अपिल गरे वा लुटको राज्य भत्काउनलाई उत्प्रेरणा जगाए त्यो आफ्नो ठाउँमा तर्क राख्न सकिएला । तर अहिलेको पछिल्लो लुटेरा अभियान भने विल्कुल फरक प्रसङ्गको हो ।
सकारका प्रधानमन्त्रीले अर्का पार्टी अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा लुटेरा शब्द खुब चल्तीमा ल्याएका छन्
पाठकबृन्द । ओली कामरेड र प्रचण्ड कामरेडको पृष्ठभूमि मात्र होइन, देउवा र श्री रामचन्दर देखि उपेन्द्र वावु सम्म सबैलाई हत्या हिंसाको दाग लागेकै हो । यसको अर्थ यो होइन की हत्या हिंसा र लुटपाटलाई प्रश्रय दिएर मुलुकमा थप अराजकता बढाउनुपर्छ । तर कुरो के हो भने पाठकबृन्द प्रचण्डसँगै गणतन्त्रसम्म आइपुगेका कामरेड नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई ‘गणतन्त्र’को अनुभूति नै नभएको पो हो की !
चन्द्रकान्त उर्फ सीके राउतसँग खुसिएको दिन विप्लवलाई चिढ्याउनै किन पथ्र्यो र ? एउटालाई म्वाइँ खाँदा अर्कोलाई बेस्मारी अँठ्याउन जरुरी थिएन । मिलाएर, पिलाएर स्नेह शेयर गरेर ठाउँमा ल्याउने जुक्ति गर्नुपर्नेमा ‘लुटेरा’ भनेपछि रिसको पोको त ठाउँ ठाउँ फुटेछ । बसुन्धराको घटना लुटेराको प्रतिक्रिया बनिहाल्यो, होइन र पाठकवृन्द ?